के तपाईंलाई सम्झना छ?—जून २०१५ | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माया मालागासी म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
के ख्रीष्टियनहरूले येशूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ?
अहँ, पर्दैन। येशू आफैले यहोवा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुभयो। उहाँले आफ्नो बुबालाई प्रार्थना गरेर हाम्रो लागि राम्रो उदाहरण बसाल्नुभयो। (मत्ती ६:६-९; यूह. ११:४१; १६:२३) त्यसैगरि सुरु-सुरुका ख्रीष्टियनहरूले पनि परमेश्वरलाई नै प्रार्थना गरे, येशूलाई होइन। (प्रेषि. ४:२४, ३०; कल. १:३)—१/१, पृष्ठ १४.
स्मरणार्थ उत्सवको तयारी गर्न हामीले हरेक वर्ष के गर्नुपर्छ?
हामीले गर्न सक्ने एउटा कुरा भनेको यस उत्सवसित सम्बन्धित बाइबल विवरणहरू तालिकाअनुसार पढ्नु हो। स्मरणार्थको समयमा प्रचारकार्यमा धेरै भाग लिने प्रयास पनि गर्न सक्छौं। साथै परमेश्वरले दिनुभएको आशामा मनन गर्न सक्छौं।—१/१५, पृष्ठ १५-१६.
आफूले देखेको रनभुल्लमा पार्ने सपना यूसुफलाई बताएपछि दुई मिश्री कैदीले कस्तो अवस्था सामना गर्नुपऱ्यो?
फिरऊनका मुख्य पियाउनेलाई पहिलेकै ओहदा दिइनेछ भनेर यूसुफले बताए। तर मुख्य पकाउनेले देखेको सपनाको अर्थचाहिं उसलाई मृत्युदण्ड दिइनेथियो र रूखमा झुण्डाइनेथियो। यूसुफले खोलेको दुइटै सपनाको अर्थ साँचो साबित भयो। (उत्प. ४०:१-२२)—२/१, पृष्ठ १२-१४.
जापानका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आशै नगरेको कस्तो उपहार पाए?
उनीहरूले नयाँ संसार अनुवाद-बाट तयार पारिएको मत्तीको किताब पाए। प्रचारकार्यमा यो किताब मानिसहरूलाई दिइँदै छ। बाइबलको विषयमा केही थाह नभएका थुप्रै मानिसले यो किताब स्वीकारेका छन्‌।—२/१५, पृष्ठ ३.
प्रथम शताब्दीमा कस्ता परिस्थितिले गर्दा राज्यको सुसमाचार फैलाउन सम्भव भयो?
रोममा स्थिर शान्ति छाएकोले गर्दा त्यहाँ युद्धहरू त्यति भएको थिएन। बाटोघाटोको राम्रो सुविधा भएकोले चेलाहरूलाई यात्रा गर्न सजिलो थियो। ग्रीक भाषा जताततै बोलिने भएकोले प्रचार गर्न सजिलो थियो। रोमी साम्राज्यभरि फैलिएर बसेका यहूदीहरूलाई समेत प्रचार गर्न सकियो। साथै सुसमाचारको पक्षमा खडा हुन चेलाहरूले रोमी कानुनको मदत लिन सक्थे।—२/१५, पृष्ठ २०-२३.
साँचो ख्रीष्टियनहरू किन इस्टर मनाउँदैनन्‌?
येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई उहाँको मृत्युको दिन सम्झन आज्ञा दिनुभयो, उहाँ पुनर्जीवित भएको दिन होइन। (लूका २२:१९, २०)—३/१, पृष्ठ ८.
बाइबलको कुनै विवरण, पात्र र वस्तुले कसै न कसैलाई वा कुनै न कुनै चीजलाई सङ्केत गर्छ भनेर हालैका प्रकाशनहरूमा बताइएको पाइँदैन, किन?
बाइबलका केही पात्रहरूले कुनै व्यक्ति वा चीजलाई सङ्केत गर्छ भनेर बाइबलमा बताइएको छ। एउटा उदाहरण गलाती ४:२१-३१ मा पाइन्छ। तर सबै पात्रले कसै न कसैलाई सङ्केत गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो होइन। तर बाइबलमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरू अनि घटनाहरूबाट पाठ सिक्नुचाहिं राम्रो हो। (रोमी १५:४)—३/१५, पृष्ठ १७-१८.
इजिप्टमा फोहोरको थुप्रोमा भेट्टाइएको पपाइरसको टुक्रा हाम्रो लागि किन चासोको विषय हो?
करिब सय वर्षअघि यूहन्नाको किताबको केही अंश भएको पपाइरसको टुक्रा भेटिएको थियो। यो टुक्रा यूहन्नाले आफ्नो किताब लेखेको दसकौंपछिको हुन सक्छ। पपाइरसका टुक्रामा लेखिएका शब्दहरू हामीसित भएका बाइबलका शब्दहरूसित ठ्याक्कै मिल्छ। यसले बाइबल भरपर्दो छ भनेर देखाउँछ।—४/१, पृष्ठ १०-११.
आफूले गरेको गम्भीर गल्तीको लागि पश्‍चात्ताप नगर्नेलाई बहिष्कार गर्नु किन मायालु प्रबन्ध हो?
बहिष्कारजस्तो गम्भीर निर्णय गरिनुमा धर्मशास्त्रीय आधारहरू छन्‌। यसो गर्दा सबैको लाभ हुन्छ। (१ कोरि. ५:११-१३) बहिष्कारको प्रबन्धले परमेश्वरको नामको आदर हुन्छ, मण्डली पवित्र रहन्छ र गम्भीर पाप गर्ने व्यक्तिको होस खुल्न सक्छ।—४/१५, पृष्ठ २९-३०.
के तपाईंलाई सम्झना छ?—जून २०१५